Ikhaya IZITOLO ZASESI FOOTBALL I-Caglar Soyuncu Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football nge-isidlaliso "Izinduna“. Indaba yethu yeCaglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube yimanje.
Impilo Nokuvuka KweCaglar Soyuncu. Isikweletu Sezithombe: IHaberekspres, i-SkySports, i-TTF ne-Instagram
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uyikho esiyingqayizivele, ukubukeka kahle ovikelayo, ongamesabi futhi owamangalisa ngokumangalisayo umdlalo wanamuhla. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abacabanga nge-Biology kaCaglar Soyuncu okuyinto ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokunye, ake siqale.
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
UCaglar Soyuncu wazalwa ngosuku lwe-23rd ngoMeyi 1996 kubazali bakhe uMnu noNkk Ömer Söyüncü edolobheni lase-İzmir, eTurkey. Lapho ezalwa, abazali bakhe, ababelandela amasiko omndeni waseTurkey baqiniseka ukuthi uthwala kanzima kunabo bonke amagama abhaliwe enamachashazi wokudidiyela oke aziwe ngabathandi bebhola lesiNgisi. Leli gama-Çağlar Söyüncü".
UCeglar Söyüncü unomndeni wakhe kusuka ku-Izmir, idolobha elikhulu laseTurkey (idolobha lesithathu elinabantu abaningi eTurkey) eyake yalawulwa uMbuso WaseRoma ngaphansi kwabadumile ALEXANDER KAKHULU owayengumnikazi wedolobha. Ngokuchaza, kulungile ukusho ukuthi uCeglar Söyüncü (osesithombeni ngezansi) wayengaba nezimpande zomndeni wakhe nozalo oluvela ku-Great Lord of Asia- ALEXANDER UMKHULU.
UCaglar Soyuncu umndeni wakhe uvela e-İzmir, idolobha elisogwini lwase-Aegean eTurkey. Isikweletu Sezithombe: I-GoogleMaps ne-Instagram
Ukukhula ekhaya lomndeni ophakathi naphakathi, uCaglar Soyuncu wachitha iningi lempilo yakhe yobusha Menemen esifundeni sase-İzmir eceleni kwabazali bakhe namanye amalungu omndeni. Wakhulela emndenini ohlonipha kakhulu inkolo namasiko amaSulumane.
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ukukhulela edolobheni ledolobha elikhulu le-Izmir, imfundo yezingane yayingagcini nje ngokufunda ngezinto zasendulo nezinye izinsalela zezimpi ngesikhathi sokubusa kwamaRoma ne-Ottoman. Kwi-Caglar encane, konke bekuphathelene nokudlala ibhola. Le nto abeyithanda kakhulu waba yingxenye yakhe, ikakhulukazi ngemuva kwezifundo zakhe.
Ngenjabulo yomdlalo, uCaglar wayezodlala ibhola usuku lonke, ikakhulukazi ngamaholide ngaphandle kokugcotshwa. Ngokushesha, ingane ehlukile yathuthukisa intshisekelo yokudlala ibhola kahle, isinqumo esisekelwa kakhulu ngabazali bakhe.
Ngemuva kokuxoxisana kakhulu nabazali bakhe nothisha besikole, uSoyuncu esifiso sakhe sokuthola amandla wabhaliswa ngo-Menemen Belediyespor, isikole sebhola lebhola lezinyawo endaweni yaseMenaeni esifundeni sase-İzmir. Ekubhaliseni, yena (efanekiselwa ngezansi) wayephikwa njengomgadli hhayi umvikeli izwe elamazi kamuva ukuthi ungumgadli.
Hlangana noCaglar Soyuncu ngemuva nje kokujoyina iklabhu lakhe lokuqala lezemfundo. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
IMen Men Belediyespor football academy inikeze uSoyuncu ithuba lokukhombisa ithalente lakhe phambi kwabaphathi be-Agents, Scouts, Coaching and Club. Okwemukelayo, akubanga nakungabaza okukhulu ukuthi wayehamba ngendlela efanele. Njengazo zonke izingane ezifunda esikoleni, uSoyuncu ufisa dlala ku-İzmir Soccer League- phiko lebhola lesifunda le-Izmir, idolobha lakhe laseTurkey.
Ngemuva kweminyaka eyisithupha edlala neMen Men Belediyespor, uSoyuncu ngonyaka u-2011 wabona amaphupho akhe obuchwepheshe I-mzmir Soccer League izokwenzeka. Ube nesivivinyo esiyimpumelelo neBucaspor, iklabhu edlala esifundeni ibhola lezinyawo zedolobha lakhe, Izmir. Ekilabhini, uCaglar Soyuncu osemncane waphonswa emuva enkabeni yemidlalo futhi kamuva, isikhungo emuva aqhubeka naso ngisho nasezingeni elifanelekile.
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela
Isu Lokudonsa phansi AmaLean Lower ukuze Usukume: Kwabancane kakhulu abathandi bebhola abake babekelwe iziqu ze-academy (isib. UJohn Lundstram), indlela enhle yokuphepha ukuphothula iziqu noma ukuqashelwa ama-scout ebhola ukwehlela ezingeni eliphansi. Lapho, ukukhethwa kweqembu lokuqala kuyaqinisekiswa futhi ukudluliselwa kungathinteka kalula.
Lokhu kwaba yiplani elihle likaCaglar Soyuncu ohle wehlela eGümüşorduspor, izinhlaka zamazwe aseTurkey lapho aphathwe njengenkosi, waqinisa indlela yakhe yokuthola iziqu zemfundo ephakeme. Ngemuva nje kokuphothula izifundo zakhe noGümüşorduspor, uSöyüncü watholakala eqenjini eliphakeme le-Altınordu, iklabhu elidlale esigabeni sesibili sohlelo lwebhola lezinyawo laseTurkey. Le futhi iklabhu eyaziwa kakhulu ngokuqagela abadlali abasebasha kwezinye izingxenye zeYurophu.
UCaglar Soyuncu wayenemishini eyodwa ngenkathi ese-Altınord- UKUDLALA EZWENI LANGAPHANDLE. Isikweletu Sezithombe: IKalspor
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ekudumeni
Ngemuva kwesizini ye-2016 / 2017, uCaglar Soyuncu ungene e-Europe esayina neqembu laseJalimane le-SC Freiburg. Kwakuyisinqumo ayenomuzwa wokuthi yisinqumo esihle kakhulu somsebenzi wakhe nokwenza kwakhe ngcono. USoyuncu wafika ekilabhini ngesikhathi esifanele, isikhathi iSR Freiburg esanda kukhushulelwa umncintiswano wase-Germany (Bundesliga).
E-SC Freiburg ngesikhathi se-2016-17, i-Caglar yaqala ukwenza ngendlela enesihluku yesenzo sokuvikela, ivikela noma ngubani ophikisana naye oza. He bakhuthazelela ukukhuphuka kwesimo sezulu esivelele kwisizini nje, baba enye yezindawo zokuzivikela ezishisayo ebholeni laseJalimane naseYurophu.
UCaglar Soyuncu wakhuphuka isitebhisi emhlabathini waseJalimane, waba ngomunye wabavikeli abahamba phambili eBundesliga. Isikweletu Sezithombe: I-Irish Mirror, iZimbo, ne-HITC
Ukukhuphuka kukaCaglar Suyuncu kumenze waqonda ngqo eqenjini lesizwe laseTurkey, intuthuko eyambona ehlangana neMan City, Bayern Munich, AS Roma neLeicester bonke baguqa ngamadolo ngokusayina kwakhe. KwakunguLeicester ekugcineni onqobayo.
Ku-9 Agasti 2018, uSöyüncü wajoyina iLeicester, ikilabhu ebheka izindlela zokuzivikela kulandela ukucabanga okuqhubekayo ngekusasa lomvikeli wabo oyinkanyezi UHarry Maguire. Ukuhamba kwe Maguire ishiye abalandeli abaningi beLeicester behlukumezekile benhliziyo kanti uCaglar Soyuncu waba yindoda yokupholisa izinhliziyo ezaphukile, isenzo esishiya abalandeli beLeicester bebuza; Ngubani odinga uHarry Maguire?.
Ngaphambi kwesizini ye-2019 / 2010 maphakathi nesizini, uCaglar Soyuncu wayesephenduke iqhawe lehlelo leLeicester. Ubunono bakhe ekuzivikeleni wamtholela udumo olukhulu Brendan Rodgers.
UCaglar Soyuncu wakhula waba ngumvikeli osezingeni lomhlaba kuPremier League. Isikweletu Sezithombe: I-DailyMail ne-Instagram
Amandla kaSoyuncu okuzivikela, ubudlwangudlwangu, amandla okudlala kanye nezinhloko ezihola phambili zidlale indima enkulu ekuthengeni isibhakabhaka iLeicester ukuze ifike endaweni yesibili ngesiwombe sokuqala sesizini ye-2019 / 2020 Premier League.
Ngaphandle kokungabaza, abalandeli beLeicester kanye nathi abathandi bebhola basethubeni lokubona omunye UCarles Puyol futhi Mat Hummels (ekwenzeni) ukuqhakaza indlela yakhe eya kwithalente elisezingeni lomhlaba phambi kwamehlo ethu. Omkhulu I-Çağlar Söyüncü ingenye yezindlela ezinhle kakhulu phakathi komugqa wokukhiqiza ongapheli wabavikeli abaphakathi abaphuma eYurophu. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo kanye nokuwina izinhliziyo zabalandeli be-Premier League, abalandeli abaningi bakhala ngokuthi bazi ukuthi uCaslar Soyuncu unentombi noma unkosikazi. YEBO! Akukho ukuphika iqiniso lokuthi lakhe ukubukeka okuhle kuhlanganiswe nesitayela sakhe sokudlala bekungeke kumbeke phezulu kulolu hlu lwazo zonke izifiso zesoka lentokazi.
Ukumbona enyukela ekubeni nodumo, abalandeli abaningi babuzile- Ngubani intombi kaCaglar Soyuncu? Isikweletu Sezithombe: IG
Ngemuva kocwaningo oluningi kangaka nge-inthanethi, Kubonakala sengathi u-Çağlar Söyüncü wenze umzamo oqinile wokungayivezi intombi yakhe noma unkosikazi wakhe (leyo, uma esevele emshadweni oyimfihlo) ngesikhathi sokubhala.
Ngakolunye uhlangothi, siyazi kwesinye isikhathi ibhola le-Premier League lingathethelelwa ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokungahlanganisi umdlalo kabi nezindaba zobudlelwano. Ngenkathi sAbadlali be-ome babona ukwehla kwabo ngenxa yezici ezinjengobudala noma iqembu elisha / uhlelo olusha, eminye imithombo yokwehla ingahle ibe ngaphandle kobudlelwano obubi. Ngalesi sizathu, iningi labathandi bebhola likhetha ukugwema ukuba sebuhlotsheni noma ekuboniseni izintombi zabo ezigabeni ezithile ezibucayi zemisebenzi yabo.
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi Çağlar Söyüncü Impilo Yakho uqobo kungakusiza uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe, kude nomuntu obona ukwenzeka njalo lapho kudlalwa umdlalo. Ukuqala, ungumuntu opholile, othanda ukukhombisa ukuthobeka, ukuthokoza futhi ukumamatheka okuningi (imvamisa hhayi umlingiswa ojwayelekile wesibhakela sanamuhla).
ICaglar Soyuncu Life Life kude nePitch. Isikweletu Sezithombe: IG kanye ne-Twitter
Futhi empilweni yakhe, uSoyuncu ungumuntu ophumayo futhi onobungane. Ukude nokudlala ibhola ngesikhathi samaholide, ungamthola kalula enkampanini yabantu abehlukene. USoyuncu uxubana nabantu bazo zonke izigaba, abanye abasiza ngokwezezimali ngaphandle kokuthola lutho olubuyayo.
UCaglar Soyuncu uphila impilo ethobekile- uchitha kubangani ngenkathi ebakhipha. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter
CAma-aglar Soyuncu Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Uma kukhulunywa ngempilo kaCaglar Soyuncu, ungumuntu ogcina ukulingana phakathi kokusebenzisa imali nokonga imali. Ngaphandle kokungabaza, inani lakhe lenani le-12.5 Million Euro (I-10.8 Million Pound) kanye nenani lemakethe le-18 Million Euro (I-15.5 Million Pound) impela umenza abe yibhola lezinyawo. Ukuba yisigidigidi nokho akudluleli empilweni yobukhazikhazi kubonakala kalula yisandla esigcwele izimoto ezibizayo njengoba kubonwe ngezansi.
Indlela yokuphila yeCaglar Soyuncu ayaziwa ngesandla esigcwele izimoto ezibizayo ngesikhathi sokubhala. Isikweletu Sezithombe: Instagram, Express and Gym4u
Ngokwesifinyezo sendlela aphila ngayo, singaphetha ngokuthi uCaglar Soyuncu uyikhambi lokuphila okungajwayelekile, (okungenani) ngesikhathi sokubhala.
CAma-aglar Soyuncu Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Umndeni kaCaglar Soyuncu ngesikhathi sokubhala phila impilo yangasese futhi engabalulekile eTurkey yize i-paparazzi ihlala isendleleni nezindlela eziningi zokuxhumana nabezindaba zenhlalo.
Esebenzisa abezindaba zakhe zenhlalo, uCaglar ngesikhathi sokubhala akaze afake abazali bakhe noma amalungu omndeni kuphrofayela yakhe. Ngenkathi ubunikazi babo buhlala buyimfihlo, umuntu osondele kakhulu emndenini uhlala engumngane wakhe omkhulu neqembu lesizwe Cenk Tosun.
Okusondelene kakhulu noMndeni wakwaCaglar Soyuncu nguCenk Tosun, ngenkathi evikela amalungu aphambili emehlweni omphakathi. Isikweletu Sezithombe- I-Twitter ne-IB
Naphezu kwalokho ukwenza umzamo oqinile wokugwema noma yikuphi ukubukelwa phansi kwempilo yabo yangasese, kukhona ku-Caglar, umuzwa wesibopho kumfowabo (wabo), (umfowethu) (udadewabo) noma izihlobo.
Amaqiniso we-Caglar Soyuncu Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukuvela kwesimanga enkosini yakhe yangaphambili eyake yabusa idolobha lakhe: Ngesinye isikhathi noma kwesinye, kwesinye isikhathi siqubuka kumuntu esingamaziyo ositshela ukuthi sibukeka njengomuntu abamaziyo, kunjalo?… Yebo, sikhethe lokho kuka-Çağlar Söyüncü no-Alexander the Great. Yiba yijaji!
Ukufana okuphawuleka kukhona phakathi kukaCaglar Soyuncu no-Alexander the Great. Isikweletu Sezithombe: IBritannica neFoxSportsAsia
Ama-Idols akhe weBhola: Ukuba yimidlalo elandelwa kakhulu emhlabeni wonke, kusobala ukuthi abadlali bebhola lezinyawo basebenza njengezikhuthazo ezigidini zabalandeli babo ababheke phezulu kubo, bebabheka njengezithombe. Ku-2016, uCaglar Soyuncu wathi izithombe zakhe ezimbili zazivikela iSpain UCarles Puyol kanye neJalimane yaphesheya I-Mats Hummels.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Caglar Soyuncu yethu Yobuntwana Indaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.